The Somali Dir Clan's History: Codka Beesha Direed: Hagardaamo Beeleed Oo Loo Degey Beelaha Shabeellada Hoose..
Hagardaamo Beeleed Oo Loo Degey Beelaha Shabeellada Hoose..
07 August, 2012 04:39:00 cammaara
Shir qarsoodi ah oo ay ka dambeeyaan rag doonaayo inay u xalaaliyaan gobolka shabeellada hoose , taasi oo ay ku taamaayeen ilaa intii ay Somaliya ay xurriyaddeeda ka heshey gumeysigii Talyaaniga.
Shirkaasi oo ka dhacay Moqadishiyo, ayaa waxaa ku kulmey beelahaasi oo khiyaamo iyo laqdabo maleegaya oo kala ah Murusade, Abgaal iyo Habargidir, kaasi oo ahaa todobaadkii tegey ahaana mid qarsoodi , ayaa ajendahiisu ahaa Gobolka Shabeelaha Hoose, gaar ahaan in Biimaal magaciisalala dagaalmao oo marka gobolka laga hadlayo aan magaciisa la xusin sinnaba, siiba marka la dhisayo maamulka Gobolka.
Fikradaas waxaa hormuud ka ah Murasade iyo abgaal oo ay ugu horeyaan dad ganasato ah.
Hase ahaatee asal ahaan waxaa qaban qaabiye ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan oo xitaa heer gaaray inuu soo jeediyo in gobolka arrimihiisa lagala tashto Yusuf indhacade iyo Xassan Dahir Aweis.
Waxaa go'aamada ka mid ahaa:1- In Madaxweynaha UDUBLAND xoogga la saaro, laguna shiro meel dalka dibidiisa ah, si kastana lagu deyo inuu ka tanaasulo fikriga uu qabo.
2- In Ruux kasta oo Biimaal siyaasi, oday dhaqameed, aqoonyahan iyo culimaba lagu deyo wax kasta oo lagu aamuusin karo, kii lagu kariwaayana naftiisa la dhaafsiiyo.
3- Xildhibaan Shiddo in laga dhigo bartilmaameed.
4- In la kala fogeeyo Gaadsan iyo Biimaal intiisa kale, iyado la adeegsanayo wadiiqo kasta ( damac siyaasadeed, dhaqaale, lays qabadsiiyo abtirsiino ahaan.
5- In Biimaal laga gooyo qabaailka kale ee gobolka dega, colaadna laga dhax shido.
Shirar fara badan oo horey usoo abaabuley Cabdiqaasim Salaad ayaa wax badan ay ka hir galeen, kuwaasi oo sanooyin ka hor , oo tusaale ahaan loo soo qaatey .
1- In guri kasta ee Biimaal waa inuu ka soo baxo oogu yeeraan hal ku abtirsado Hawiye, taasi oo loo maraayo in laga woda guursado hablahooda, qiimo kasta ha qaadatee.
2- In guurkaasi aan lagu ekeysanin, ooh al iyo laba waxii laga dhalo la raadiyo mid kale sidii guri walbo loo helo xariir.
3- In lafa Biimaal qaarkooda la hoos galo, laguna xirnaado dhinac walbo ilaa 15 sano , ka dib ubadkii ka abuurmo ayaa dhulkaani xaq u yeelandoono oo aan laga saari Karin.
4- Culumada Biimaal in gacanta lagu dhigo oo dhaqaale ahaan loo hantiyo , dhaqaale ahaan, xaj iyo cimri iyo ayaga oo naago lagu daro iyo ayaga oo guryo loo dhiso, si ayaga iyo beelahooda look ala gooyo.
5- In beeraha laga woda iibsado oo loo noqdo meel dhulka lala leeyahay si loo helo meelo leysku xirnaankaro, oo burrito lagula doodikaro haddii ay caalamka donaan inay ka hadlaan.
6- In la woda iibsado aqonyahanka , iyo odey dhaqameedka isla markaana laga woda ilaaliyo xagga wax barashada iyo xagga dhisid dhaqaale, oo ay noqdaan kuwa aan ka maarmin beelaha hawiye.
7- Maamul kastaa oo la dhisaayo waa in lagu soo xiro kuwa aan dhiigga laheen , amase diyaar u ah inay illoobaan danaha beelahooda, iyo siiba kuwa laga guursadey oo masruufaayo awlaad ay inoo dhaleen, abti iyo eysan ahaan.
8- In maamul kasta oo la dhisaayo waa inuu ahaadaa mid annaga naga go’ay, saa darteed waa inaan u sameeynaa degmooyin dheeraad ah , si aan awood oogu yeelanno oo aan xubno dheeraad ah maamul kastaa ee gobolka laga sameeynaayo.
9- Beelaha la dega Biimaal waa inaysan mar helin fursad ay ku heshiiyaan oo ay danahooda isu sheegaan.
10- Waa in xanshuuraadka laga qaadaayo ay hormuud ka ahaadaan dad ayaga u dhashey si ay isku nacaan, oo siba loo siiyaan hawlaha hadba laftii u jilicsan inay na taageeraan.
11- In Kuwa kale loo tuso dhibaatada kuwa ku haaya, inay ayaga u dhasheen, si ay u arkaan inaan annaga aannu nahay kuwa u naxariisanaayo.
Shirarka beelahaani ayaa aad u fara badnaa, ayaan lagu soo koobi Karin qoraalkaani, hase yeeshee waxay arrintu u taallaa beelaha deggan gobolka shabeellada Hoose haba oogu horreeyo Biimaal.
Ninka qeerkii loo xiiraayow adiga soo qoyso.!!!!!
XIGASHO SHABAKADA JAMMAAME
Posted by DIRSAME at 10:58 PM